काजि निवासमा हिजो के के भयो प्रचण्ड र ओलीको बीचमा ? | सहारा टाइम्स
Home » Politics » काजि निवासमा हिजो के के भयो प्रचण्ड र ओलीको बीचमा ?
काजि निवासमा हिजो के के भयो प्रचण्ड र ओलीको बीचमा ?
SAHARA TIMES Saturday, February 11, 20170No comments
काठामाडौं माघ २९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच पछिल्ला केही समयदेखिको संवादहीनता हिजो तोडिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा ललितपुर हात्तीवनमा रहेको श्रेष्ठकै निवासमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको थियो ।
दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध सुधार्दै राजनीतिक गतिरोध तोड्न माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ यतिवेला सेतुको भूमिका निभाउन प्रयासरत हुनुहुन्छ । त्यसो त दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान गर्ने समझदारी निर्माणदेखि ओली नेतृत्वमा सरकार गठनका निम्ति पनि श्रेष्ठले दुई पार्टीबीच संयोजनकारी भूमिका निभाउनु भएको थियो ।
ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि बढेको दुई पार्टीको तिक्तता मेट्न पनि श्रेष्ठ सक्रिय भएर लागिरहनु भएको छ ।
१० फागुन पहिलो हप्तासम्म निर्वाचन मिति घोषणा
प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग फागुनको पहिलो साता सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
वार्तामा ओलीले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गरे मात्रै विश्वासको वातावरण बन्ने ताएपछि प्रधानमन्त्रीले फागुन पहिलो साताभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको तयारीमा सरकार लागिसकेको भन्दै मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो ।
‘छिटै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले ओलीलाई विश्वस्त तुल्याउँदै व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले चुनावको मिति चाँडै घोषणा गर्छु भनेर भन्नुभयो, तर हामी अझै पनि ढुक्क छैनौँ । हामी चुनावको मिति घोषणाको प्रतीक्षामा छौँ ।’
२० स्थानीय तहको चुनाव १ जेठमा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी १ जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने सरकारको तयारी रहेको एमाले नेतृत्वलाई जानकारी गराएका थिए । ‘बजेट भाषणअगावै १ जेठमा निर्वाचन गर्ने गरी सरकार अगाडि जान्छ,’ प्रधानमन्त्रीले ओलीसँग भन्नुभयो । उहाँले यसपटक मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याई निर्वाचनको वातावरण बनाउन सघाउन एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
निर्वाचन नगराउने हो भने देशभित्र नकारात्मक परिणाम देखिने सम्भावना रहेकोतर्फ दुवै पार्टी सहमत भएको रावलले जानकारी दिनुभयो ।
‘संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा छिटो निर्वाचन नगर्ने हो भने नकारात्मक परिणाम देखिनेछन् भन्नेमा हामी दुवै पक्षको एकै मत रह्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसो हो भने निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा गर्नुप¥यो भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ । निर्वाचन घोषणा गरिएन भने उपलब्धिहरू धरापमा पर्छन्, सरकारको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले छिटो मिति घोषणा गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि राखेका छौँ ।’
आ–आफ्ना अडान कायमै
श्रेष्ठनिवासमा साढे दुई घन्टा छलफल गरे पनि दुवै पक्ष कुनै सहमतिमा भने पुगेनन् । छलफलमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान दोहो¥याएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो ।
‘संविधान कार्यान्वयनको जटिलताका विषयमा दुई नेताले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरे कुनै निष्कर्ष निस्किएन,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक आफू निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै त्यसको वातावरण बनाउन संविधान संशोधनमा सघाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । एमाले अध्यक्षले भने संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता नभएको भन्दै पहिले निर्वाचन मिति घोषणाको कुरामा अडान राखिरहेको स्रोतले बतायो ।
‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमा सघाई सहमतीय राजनीति अगाडि बढाउन प्रस्ताव गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, एमाले अध्यक्षले पटकपटक निर्वाचनको मिति घोषणापछि मात्र संशोधन अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।’
सुप लिँदै छलफलमा बसे
छलफलका लागि एमाले अध्यक्ष ओली उपाध्यक्ष भीम रावललाई लिएर बिहान ९ः४० बजेतिर श्रेष्ठनिवास पुग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसभन्दा केही अघि नै श्रेष्ठनिवास पुग्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसहितका नेताहरू मध्याह्न १२ बजेपछि श्रेष्ठनिवासबाट बाहिरिनु भएको थियो ।
छलफलका क्रममा डिनरका लागि श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभएको थियो । सुरुमा कालो चिया पिएर छलफल थालेका नेताहरूले त्यसपछि सुपसहित खाजा खाएर उठेको श्रेष्ठका सहयोगी सुशान्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
भेटवार्तापछि श्रेष्ठ दिल्लीमा
एमाले–माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने शुक्रबार नै नयाँदिल्ली जानुभयो । पार्टीनिकट अखिल भारतीय एकता मञ्चको एकता भेलालाई सम्बोधनका लागि श्रेष्ठ दिल्ली जानुभएको हो ।
श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रको विदेश विभाग प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ । दिल्लीमा रहँदा उहाँले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आईलगायतका पार्टीका नेताहरूस“ग पनि राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको माओवादी केन्द्रको विदेश विभागले जनाएको छ ।
ओलीका प्रश्न, प्रचण्डको जवाफ
ओली स् निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरा मात्र आइरहेको छ । तर, घोषणा गर्नुहुन्न । सरकारले किन मिति घोषणामा ढिलाइ गरिरहेको हो रु पहिले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुहोस् । त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनको दिशामा देश अगाडि बढ्छ । संविधान संशोधनमा नै तपाईंहरूको चिन्ता हो भने पहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुहोस् अनि संशोधनमा छलफल अगाडि बढाउनुहोस् । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छौँ भनेर मात्र हुँदैन । हामीलाई विश्वास छैन । अहिले पनि फागुन पहिलो साता भन्नुभयो । कसरी विश्वास गर्ने ?
प्रधानमन्त्री स् निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा गर्ने पक्षमा म छु । तपाईंहरूले निर्वाचनका सवालमा देखाइरहनुभएको चिन्ताप्रति म पनि सहमत छु । फागुनको पहिलो सातासम्म पनि मिति घोषणा गरिएन भने अप्ठ्यारा र जटिलताहरू आउँछन् । निर्वाचनको वातावरण बनाउन तपाईंहरू पनि सघाउनुस् । मधेसीलाई पनि सहमतिमा ल्याई निर्वाचनको वातावरण बनाऔँ । त्यसका लागि संसद्मा रहेको संविधान संशोधन विधेयकमा तपाईंहरूले पनि सघाउनुप¥यो । निर्वाचनका लागि वातावरण निर्माण गर्नु ठूलो कुरा हो भनि आजको नयाँपत्रिकामा समाचार छ .